ကြှနျမကို ခဈြရငျ ဆေးလိပျဖွတျပါ…. – Shinyoon
ကြှနျမကို ခဈြရငျ ဆေးလိပျဖွတျပါ….
November 24, 2020 by Shin Yoon
တဈခုခုတှေးနတေဲ့အခါ ဆေးလိပျကို ခဲပွီး ငေးနတေတျတဲ့ ရှငျ့အကငျြ့လေးကို ကြှနျမသိတယျ ။ ဂိမျးဆော့နတေဲ့ ဆေးလိပျပွေးပွေးရှာတတျတဲ့ အပွုအမူလေးတှလေဲ တှတေ့ယျ ။ တကယျဆိုရငျ ဆေးလိပျတှေ မသောကျစခေငျြတော့ဘူး ။
ကြှနျမ မတှခေ့ငျကတညျးက ဒီဆေးလိပျတှဟော အဖျောဖွဈခဲ့တယျဆိုပမေယျ့ ကြှနျမ အနားနားရောကျလာတဲ့အခါ ဒါတှကေို စှနျ့လှတျလိုကျစခေငျြပွီ ။ ကြှနျမကို ခဈြရငျဆိုပွီး ပွောလို့ရခဲ့မယျဆိုရငျ ဆေးလိပျတှေ ဖွတျစခေငျြပွီ ။
တှေးစရာတှမြေားနလေို့ ဆေးလိပျပွေးရှာနမေယျ့အစား ကြှနျမကို ပွောပွလို့ရတဲ့ဆိုတဲ့ စိတျလေးရှိစခေငျြပွီ ။ အရငျကလို တဈယောကျတညျးလဲ မဟုတျတော့ဘူးလေ ။ အထီးကနျြနစေရာလဲ မလိုတော့ဘူးလေ ။
မိနျးကလေးတိုငျးရဲ့စိတျမှာ … ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့အတူ အခြိနျတှအေကွာကွီး ဖွတျသနျးခငျြတဲ့အတှေးတှေ ရှိကွတယျ ။ ကနျြးမာရေးထိခိုကျစတောကို ရှောငျစခေငျြကွတယျ ။ ငါ့ကောငျမလေးကတော့ ငါဆေးလိပျသောကျတာ မတားပါဘူးဆိုတာ သူ သဘောကလြို့မဟုတျဘူး ။ တကယျတမျးကတြော့ သူ ပွောမထှကျလို့ပါ ။ ခြုပျခယျြတယျဆိုတဲ့အတှေးမြိုး ထိနျးခြုပျနတေယျဆိုတဲ့အတှေးမြိုး မ၀ငျစခေငျြတဲ့အတှကျ နားလညျပွီး ခှငျ့ပွုထားကွတာ မြားတယျ ။ ဘယျသူမဆို .. ကိုယျခဈြတဲ့သူကို အပွဈအနာအဆာကငျးပွီး အသကျရှညျရှညျနခေငျြကွတာခညျြးပဲ ။
တခြို့ကောငျမလေးတှကေတြော့ ဆေးလိပျသောကျထားရငျ အနားကို မကပျနဲ့ဆိုပွီး မာမာထနျထနျပွောတတျကွတယျ ။ ဒါကို ငွိုငွငျတာလို့မထငျနဲ့ ။ တကယျတမျးကတြော့သူ့စိတျထဲမှာ တဈခုခုဖွဈလာရငျဆိုတဲ့ စတေနာကို မွငျတတျစခေငျြတယျ အပွောမတတျတာပဲ ရှိတာပါ ။
ကြှနျမကို ခဈြရငျဆိုပွီးသာ ပွောပိုငျခှငျ့လေးရှိရငျ … ဆေးလိပျဖွတျစခေငျြတယျ ။ ဆေးလိပျဆိုတာ ကောငျးတဲ့အရာမဟုတျဘူးလေ အခုမသိသာပမေယျ့ နောငျတဈခြိနျ ကြှနျမတို့အတူတူရှိတဲ့အခါမှ ရောဂါတှထေဖွဈရငျ ကြှနျမတို့အနာဂတျတှကေ ပြျောစရာတှေ ကောငျးပါဦးမလား တှေးစခေငျြတယျ ။ အမုနျးခံပွီး ပွောခဲ့ဖူးလို့ ကြှနျမတို့ ပွဿနာတှေ အကွိမျကွိမျတကျရတဲ့ နလေ့ေးတှကေို အမှတျရပါ ။ ဒီတဈခါ ခြိုခြိုသာသာလေးပွောပွမယျ ။ ကြှနျမကို ခဈြရငျ ဆေးလိပျဖွတျပေးပါ။
ကျွန်မကို ချစ်ရင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ….
တစ်ခုခုတွေးနေတဲ့အခါ ဆေးလိပ်ကို ခဲပြီး ငေးနေတတ်တဲ့ ရှင့်အကျင့်လေးကို ကျွန်မသိတယ် ။ ဂိမ်းဆော့နေတဲ့ ဆေးလိပ်ပြေးပြေးရှာတတ်တဲ့ အပြုအမူလေးတွေလဲ တွေ့တယ် ။ တကယ်ဆိုရင် ဆေးလိပ်တွေ မသောက်စေချင်တော့ဘူး ။
ကျွန်မ မတွေ့ခင်ကတည်းက ဒီဆေးလိပ်တွေဟာ အဖော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်မ အနားနားရောက်လာတဲ့အခါ ဒါတွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်စေချင်ပြီ ။ ကျွန်မကို ချစ်ရင်ဆိုပြီး ပြောလို့ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆေးလိပ်တွေ ဖြတ်စေချင်ပြီ ။
တွေးစရာတွေများနေလို့ ဆေးလိပ်ပြေးရှာနေမယ့်အစား ကျွန်မကို ပြောပြလို့ရတဲ့ဆိုတဲ့ စိတ်လေးရှိစေချင်ပြီ ။ အရင်ကလို တစ်ယောက်တည်းလဲ မဟုတ်တော့ဘူးလေ ။ အထီးကျန်နေစရာလဲ မလိုတော့ဘူးလေ ။
မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့စိတ်မှာ … ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူ အချိန်တွေအကြာကြီး ဖြတ်သန်းချင်တဲ့အတွေးတွေ ရှိကြတယ် ။ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတာကို ရှောင်စေချင်ကြတယ် ။ ငါ့ကောင်မလေးကတော့ ငါဆေးလိပ်သောက်တာ မတားပါဘူးဆိုတာ သူ သဘောကျလို့မဟုတ်ဘူး ။ တကယ်တမ်းကျတော့ သူ ပြောမထွက်လို့ပါ ။ ချုပ်ချယ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး ထိန်းချုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး မ၀င်စေချင်တဲ့အတွက် နားလည်ပြီး ခွင့်ပြုထားကြတာ များတယ် ။ ဘယ်သူမဆို .. ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို အပြစ်အနာအဆာကင်းပြီး အသက်ရှည်ရှည်နေချင်ကြတာချည်းပဲ ။
တချို့ကောင်မလေးတွေကျတော့ ဆေးလိပ်သောက်ထားရင် အနားကို မကပ်နဲ့ဆိုပြီး မာမာထန်ထန်ပြောတတ်ကြတယ် ။ ဒါကို ငြိုငြင်တာလို့မထင်နဲ့ ။ တကယ်တမ်းကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင်ဆိုတဲ့ စေတနာကို မြင်တတ်စေချင်တယ် အပြောမတတ်တာပဲ ရှိတာပါ ။
ကျွန်မကို ချစ်ရင်ဆိုပြီးသာ ပြောပိုင်ခွင့်လေးရှိရင် … ဆေးလိပ်ဖြတ်စေချင်တယ် ။ ဆေးလိပ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေ အခုမသိသာပေမယ့် နောင်တစ်ချိန် ကျွန်မတို့အတူတူရှိတဲ့အခါမှ ရောဂါတွေထဖြစ်ရင် ကျွန်မတို့အနာဂတ်တွေက ပျော်စရာတွေ ကောင်းပါဦးမလား တွေးစေချင်တယ် ။ အမုန်းခံပြီး ပြောခဲ့ဖူးလို့ ကျွန်မတို့ ပြဿနာတွေ အကြိမ်ကြိမ်တက်ရတဲ့ နေ့လေးတွေကို အမှတ်ရပါ ။ ဒီတစ်ခါ ချိုချိုသာသာလေးပြောပြမယ် ။ ကျွန်မကို ချစ်ရင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ပေးပါ။
ကြှနျမ သူ့ကိုမနေို့ငျပါပွီ ။